55% Gbanyụọ anụ anụ ahụ! Nanị $ 39.90 maka Oge Nanị
Home » Onye mmadu » 55% Gbanyụọ anụ anụ ahụ! Nanị $ 39.90 maka Oge Nanị
55% Gbanyụọ Ụdị Egwuregwu Beast!
Maka obere oge naanị, ịnwere ike ịchekwa 55% na usoro onye mmemme Beast. N'akụkụ a nke anụ Beast, ị na-akwụ naanị $ 39.90 tinyere mbupu na njikwa maka usoro mmemme DVD zuru ezu. Isi anụ ọhịa na-agba ọsọ maka $ 89.95
Kedu ihe bụ anụ anụ ọhịa?
Beast anụ bụ otu n'ime ihe mgbatị niile, ihe oriri, na mmezi usoro. O nwere 12 Dynamic Set Training na 4 DVD.
E kere ya ka ị rụọ nnukwu anụ ahụ, dị ka obere oge dị ka o kwere mee. Mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, anụ ahụ anụ ahụ nwere ike ịgbakwunye 10 lbs nke uru ahụ dịka ụbọchị 90. Anụ anụ ahụ dabeere na echiche nke Ọzụzụ Ọdịiche Dynamic Set.
Ọzụzụ dị iche iche dị omimi bụ usoro nhazi nke setịpụrụ na reps nke na-eme ka oge ahụ dị nro na mgbaghara na mgbaru ọsọ nke na-agwụ ahụ ike ma na-emegharị "eriri ahụ ike." Nhazi Ọganihu Na-enyere aka mee ka mmepụta nke testosterone gị. Testosterone bụ hormone kachasị dị mkpa maka ịmepụta ahụ ike, n'ihi ya, ka ụbụrụ na-eme ka ahụ gị dịkwuo, ngwa ngwa ọ ga-eto.
Pịa ọkọlọtọ dị n'okpuru maka ozi ndị ọzọ na 55% gbanyụọ ire anụ anụ anụ
* Nke a 55% Gbanyụọ nke anụ ahụ anụ ahụ dị ka nke 3 / 7 / 16 12: 00 AM EST. Ọnụahịa ngwaahịa na nnweta dị oke nke oge / oge egosiri na ha nwere ike ịgbanwe. Ihe ọ bụla ego na nnweta ozi gosipụtara na Beachbody n'oge nzụta ga-emetụta ịzụta nke usoro Beast exercise workaut program.
March 7, 2016 Akwụsị Onye mmadu Enweghị asịsa
Franklin, WI Oge Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ 7 Day Free Gym Pass
Soro M Ọ bụrụ na Ịchọrọ Ịkwa Elu Tank Mmadụ naanị $ 11.95